ကိုယ်၀န်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး | Page 35 | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးနောက် ကိုယ်အလေးချိန် ဘယ်လိုပြန်ချကြမလဲ
4.10.2016 | ကိုယ်၀န်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
ကလေးမွေးပြီး6လ - 1 နှစ် အကြာမှာ ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်အချိန်က ကိုယ်အလေးချိန်ပြန်ရောက်အောင် လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ဆွဲထားသင့်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွ...
ပန်းကလေးများထံမှ ပေးစာများ (အပိုင်း - 10)
3.10.2016 | ကိုယ်၀န်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
" ကိုယ်၀န်ဆောင်မိခင်မှာ B ပိုးရှိရင် ကလေးကို မကူးစက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ "ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးမြန်းလာတဲ့မေးခွန်းကို သားဖွားနှင့်မီးယပ် အထူး...
ဗီတာမင် A နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ
30.9.2016 | ကိုယ်၀န်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
ဗီတာမင် A သည် အသည်း၌ သိမ်းဆည်းလေ့ရှိသော အဆီတွင်ပျော်ဝင်သည့် ဗီတာမင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဗီတာမင် A သည် သနေ္ဓသားလောင်း၏နှလုံး၊ အ...
ပါရာစီတမော ကို ကိုယ်၀န်ဆောင်အမျိုးသမီးများတွင် စိတ်ချစွာသုံးစွဲ၍ ရနိုင်ပါသလား
27.9.2016 | ကိုယ်၀န်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
ပါရာစီတမောဟု လူသိများသည့် Acetaminophen ဆေးဝါးသည် ဖျားနာ ကိုက်ခဲမှုများအတွက် အသုံးများသော ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကျယ်ကျယ်...
ပန်းကလေးများထံမှ ပေးစာများ (အပိုင်း-9)
26.9.2016 | ကိုယ်၀န်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
** ပထမ ကလေးကို ခွဲမွေးထားရင် ဒုတိယတစ်ခေါက်ကျရင်ကော ခွဲမွေးရမှာပဲလား? **
ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးမြန်းလာတဲ့မေးခွန်းကို...
အသက် 35 နှစ်နောက်ပိုင်း ကိုယ်၀န်ဆောင်ခြင်း
23.9.2016 | ကိုယ်၀န်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
အသက် 35 နှစ်နောက်ပိုင်းမှ ကိုယ်၀န်ဆောင်ရန်စဉ်းစားနေပါသလား? ဤကဲ့သို့ဆိုပါက အသက်ကြီးမှ ကိုယ်၀န်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ကိုယ်၀န်က...
20.9.2016 | ကိုယ်၀န်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
ကိုယ်၀န်ဆောင်မိခင်တစ်ယောက်ဟာ မိခင်ရောကလေးပါ ကျန်းမာဖို့အတွက် သင့်တင့်မျှတတဲ့ အစာအာဟာရကို စားသုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အစာအာဟာရပြည့်၀အောင် စ...
သားပျက်သားလျောဖြစ်ပြီး ဘယ်လောက်အကြာမှာ ကလေးထပ်ယူသင့်သလဲ
16.9.2016 | ကိုယ်၀န်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
သားပျက်သားလျှောဖြစ်ခြင်းသည် ကလေးလိုချင်တဲ့မိခင်လောင်းများအတွက် ၀မ်းနည်းစရာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးအရမ်းလိုချင်တဲ့အမျို...